Mabhuku aJuan del Val, ezviitiko zvinopa sei mabasa akanaka | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku aJuan del Val
Kana uchibvunza pawebhu nezve "Juan del Val mabhuku", mareferenzi akajairika anowanikwa ari pamusoro pebhuku rake Candela (2019). Iyi nganonyorwa ibasa repiri rakaburitswa roga nemunyori, izvo zvakamupa mubairo wePrimavera gore rimwe chetero. Juan del Val anomira pakunyora nyaya chaidzo achishandisa zviitiko zvake, sezvaakazvitaura mubvunzurudzo yake Zenda: "Ini chete ndinoziva kunyora zvandinoziva ...".
Iye munyori akatanhamara zvakanyanya munyika yeterevhizheni, kwaakambove neruzivo semutungamiriri, munyori wechiratidziri, muratidziri uye mugadziri, zvese redhiyo neTV. Muhupenyu hwake hwese, munyori airatidza kuseka. Chimwe chinhu chinonakidza ndechekuti aratidza kuvenga kwake kune mamwe masocial network, uye akasvika pakuzivikanwa se "AntiInstagram". Kubva 2011 anga achizivikanwa nekutora kwake chikamu muchirongwa chakakurumbira Juru de Kanyanga 3.
1 Pfupiso yehupenyu hwaJuan del Val
1.1 Zvinyorwa zvemitambo
2 Mabhuku aJuan del Val
2.1 Zvinoita kunge nhema (2017)
2.2 Kenduru (2019)
Pfupiso yehupenyu hwaJuan del Val
Juan del Val Pérez akaberekerwa muMadrid nemusi weMuvhuro, Gumiguru 5, 1970. Muhudiki hwake aionekwa nekutsamwa uye kupandukira zvakanyanya. Aya maitiro akakanganisa zvidzidzo zvake zvesekondari, achidzingwa nekuda kwechikonzero icho nguva dzinoverengeka. Basa rake rekutanga raive sevashandi vekuvaka, uye ipapo pashoma nepashoma akapinda munhau. Muna 1992, akatanga kudzidzira basa rekupedzisira iri National Radio yeSpain uye kwenguva yakati aive zvakare mukurumbira wekurwa nemabhuru.
Juan del Val akaroora muna Gumiguru 6, 2000 nemunyori ane mukurumbira uye muratidziri Nuria Roca. Nekuda kwemubatanidzwa uyu, vana vatatu vakaguma: Juan, Pau naOaclivia.
Ane makore makumi maviri ebasa rakabudirira, akafamba kuburikidza akakosha midhiya yeSpanish, senge: Kanyanga 3, TVE, Canal 9 y Telecinco. Zvakaenzana, muna 2014 akapa kwemakore mana akateedzana chirongwa cheredhiyo Chinhu chakanakisa chinogona kuitika kwauri, nemukadzi wake. Mumakore gumi apfuura akashandira iyo taura ratidza Svosve, semunyori, munyori uye anotaurisa.
Juan del Val akatanga munyika yezvinyorwa nemabhuku maviri, aakanyora pamwe chete nemukadzi wake: Za Ana, wewakafa (2011) uye Iko kusadzivirika kwerudo (2012). Hazvina kusvika muna2017 ndipo paanofunga kuunza yake yekutanga solo rwiyo: Zvinoita kunge manyepo, zvichibva pane zvakaitika kwauri. Iri basa, munguva pfupi, rakakwanisa kuve pakati pemabhuku anotengesa zvakanyanya.
Mushure mekugamuchirwa kwakanaka kwebasa rake rekutanga roga, munyori akakura aine chivimbo uye akaenderera achiita zvaanoda: kunyora Makore maviri chete gare gare akafunga kushambadza yake yechipiri novel, Candela (2019). Iyo nyaya inotaurwa mumunhu wekutanga uye ane protagonist mukadzi anoshamisa ane hupenyu muenzaniso wekuzvivandudza.
Juan del Val akashamisika chaizvo kuhwina mubairo wePrimavera de Novela 2019 nenyaya iyi, mubairo uyo ma greats ezvinyorwa zveSpanish akaonekwa. Iyi 2021, munyori akazivisa kuvhurwa kwebhuku Delparaíso, inovhura inozarura mikova kune yakasarudzika mataundi muMadrid akaputirwa nezvakawanda zvakavanzika.
Basa raJuan del Val semunyori wemunyori rave pfupi, zvisinei, munyori akapa nyaya dzakanaka dzakapfuura. Tevere, inotakurika tudyo pane yega yega yemabasa ake.
Zvinoita kunge manyepo (2017)
Mune ino ino yazvino uno, munyori anotaurira yake ega nyaya mumunhu wekutanga, achishandisa mapfupi asi akagadzirwa zvakanaka zvitsauko zveizvi. Iyo rondedzero yakanangana nerwendo uye shanduko yehupenyu hwake, kuburikidza nenyaya nyowani uye isina kuchengetedzwa. Kunyangwe paine vanhu vokunyepedzera, munyori anoita rondedzero yechokwadi uye yakajeka yezviitiko zvakawanda, achizorodza zvimwe zvikamu nekuseka kwakanaka kunoenderana naye.
Zvinoita kunge manyepo iyo nyaya yaClaudio, anozvininipisa, asingateereri uye anopandukira jaya. Muchikamu chega chega chebhuku pane kuratidzwa kwehupenyu hwe protagonist, pachena uye neushingi, kuratidza yakanaka nguva uye vamwe kwete zvakanyanya. Kuenderera mberi kwekushandisa kwekuzviratidza kunosimbiswa zvakanyanya. Munyori anoshandisa zviwanikwa izvi kuti ataure nezvekuti akapinda sei zvishoma nezvishoma mukutora nhau kusvikira avaka basa rakabudirira, kunyangwe asina kudzidza zviri pamutemo bhizinesi iri.
Claudio anorondedzera kushushikana kwehudiki hwake uye nemabatiro aakaita hupenyu hwakaomera vabereki vake, kusvika pakuvharirwa munzvimbo yepfungwa. Pakati pezvimwe zvinhu, inotsanangura kukosha kwevakadzi vakapfuura nemuhupenyu hwake nedzidziso dzavakasiya maari.. Kazhinji kutaura, ndeyechokwadi kwazvo nhoroondo yehupenyu iyo munyori anoratidza zviitiko zvinonakidza.
Zvinoita kunge nhema (Novel)
Ndiyo rondedzero yechipiri yakaburitswa naJuan del Val, uye yakamupa mubairo wePrimavera de Novela 2019. Iyi inyaya yemunhu wekutanga iyo taura nezve iyo vakadzi nezviitiko zvavo. Munyori akatsvaga kuratidza zvakaitika chaizvo, kupfuura fungidziro. Izvi zvakataurwa mubvunzurudzo yaRosa Villacastín, maakataura kuti akavaka hunhu uhwu zvichibva pachokwadi cheshamwari yaishungurudzwa.
Candela mukadzi akaita sevamwe vakadzi chaivo vatinogona kuwana munzvimbo dzakakurumbira. Iko kusarudzika kunoisiyanisa ndiko kupenya kwayo uye nehunyanzvi hwayo kutarisana nematanho. Iye zvino ave pamakore gumi emana, uye hupenyu hwake hunoratidzwa nerombo rakaipa, njodzi yakatevera mhuri yake kubva panguva dzekare.
Iye anoshanda sahweta mune imwe tavern yemuno, iyo yaanomhanya aine vamwe vakadzi vaviri - ambuya vake naamai vake (mukadzi ane ziso rimwe) -. Vakadzi vatatu vakave nenguva yakaoma, asi kuseka kwavo, kwakati siyanei, kunovabatsira kutsungirira zuva nezuva.
Kukunda zvipingamupinyi, kutyisidzira uye kuzvidemba, Candela achamanikidzwa kuenda kumberi uye kumupa zvakanakisa mukutsvaga hupenyu huri nani. Iyo nyaya inokodzera chaizvo kune zvazvino chokwadi uye izvo zvinosiya zvinopfuura imwe zvichiratidza zvakadzama.
Candela: Primavera Mubairo ...
Ichi chazvino chikamu chakapihwa nemunyori chakonzera kusagadzikana nekuda kwenyaya dzakasimudzwa mune zvirimo. Iyo inoverengeka ine vanoverengeka protagonists uye yakaiswa mune yakasarudzika mataundi kunze kwekunze kwe Madrid. Juan del Val anoratidza nyaya inomanikidza iyo inoratidza zvishoma nezvishoma iyo yakasviba yeSpanish jet set, iyo nyika iyo vazhinji vangade kuve yavo uye vanoziva.
Iyo inoverengeka delparaiso inoratidza vagari vemuzvivakwa zvepamusoro muMadrid, munogara mhuri dzakasiyana, kubva kune vakapfuma kusvika kune vashandi vavo. Hunhu hwega hwega ndi protagonist wenyaya yavo pachavo, iine zvakavanzika zvakawanda, kusuwa uye kusawirirana. Pakati pemitsara huwandu hwakawanda hwezvinetso zvemhuri hunoburitswa, zvinokanganisa zvisina hunyanzvi zvinogona kuvanza.
Iyo inzvimbo yakachengetedzwa zvakanyanya iyo inoitirwa kudzivirira chero kusangana nevekunze nyika uye uko kwese kunoratidzika kunge "kwakakwana". Munyori haangofumure chiratidzo chevagari veboka iri, asi zvakare anofumura maonero evaya vanoona kubva kunze, uyo - anonyengedzwa neasina basa - anochengetedza kuti zvese zviri mukati i "paradhiso". Nekudaro, mushure mekupinda, vasina kungwara vanotarisana neicho chakasimba uye chakajairika chokwadi: hapana zvazvinoratidzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mabhuku aJuan del Val
Michel Houellebecq ane zuva rekuzvarwa. 5 nhetembo dzebasa rake
Mabhuku evana: Tea Stilton zvekare uye Martina akateedzana